Location: musha » Kutumira » Waini & Midzimu » Mazambiringa Anopenya kubva kuSpain Dambudziko "The Other Guys"
Mufananidzo nerubatsiro rweE.Garely
MaFrench akashandisa madhora mazhinji ekutengesa achitiita kuenzanisa Champagne nenguva dzakanaka, panguva imwe cheteyo vachitikurudzira kuti titende kuti mazambiringa ese anopenya maFrench. Mhinduro? Champagne rave izwi rinowanikwa kwese kwese. Kana isu tine chido chegirazi rewaini inopenya uropi hwedu hunobva hwanamatira paizwi Champagne, uye isu tinoisa odha yedu nebartender kana maneja muchitoro chewaini.
Muchokwadi, kunze kweFrance (inobudisa mamiriyoni 550 mabhodhoro), tine zvisarudzo zvinosanganisira Italy (prosecco - kubudisa 660 +/- mabhodhoro), Germany (inobudisa mabhiriyoni 350 mabhodhoro), Spain (Cava. +/- kubudisa mamiriyoni 260 mabhodhoro). ), uye United States (inogadzira 162 miriyoni mabhodhoro) (forbes.com). Takasvika pakuziva kuti waini inon'aima inotyisa kana tichifara, inoshamisa kana takasuwa, inodiwa kana tadzingwa, uye chaizvo zvatinoda kana tawana bvunzo paOmicron.
Chikumbiro chepasi rose chewaini inopenya chakawedzera kugadzirwa nezvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana kubva muna 57 uye kugadzirwa kwepasi rose kunotora mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emabhodhoro ari pasi zvishoma pane 2002 muzana yemabhodhoro ewaini anogadzirwa pasi rose e2.5 bhiriyoni. Kuwedzera zvishoma nezvishoma ndiko kudiwa uye kugadzirwa kwewaini inopenya iAustralia, Brazil, UK, nePortugal.
Waini Inopenya muSpanish? CAVA
CAVA zvinoreva "bako" kana "cellar" apo, pakutanga kwekugadzira cava, waini inopenya yakagadzirwa uye yakwegura kana kuchengetedzwa. Vagadziri vewaini veSpanish vakashandisa zviri pamutemo izwi iri muna 1970 kuparadzanisa chigadzirwa cheSpanish kubva kuFrench champagne. A cava inogara ichigadzirwa neyechipiri kuviriswa mubhodhoro, uye neinosvika 9 mwedzi yekuchembera kwebhodhoro pamasese.
Don Josep Raventos, muzukuru waDon Juame Codorniu (muvambi weCordorniu - mumwe wevagadziri vakuru vecava muSpain), akaita bhodhoro rekutanga rekodhi reCava mudunhu rePenedes, Northeastern Spain. Panguva iyoyo, phylloxera (zvipembenene zvakaita irwada zvakaparadza minda yemizambiringa zvinoshuva mhando dzvuku muPenedes) zvakasiya dunhu riine marudzi machena chete. Panguva iyi, mhando chena dzaisaita zvekutengesa padzakagadzirwa kuita waini yakanaka. Kudzidza nezvekubudirira kweFrench champagne, Raventos akadzidza maitiro, achigadzirisa kuti agadzire shanduro yeSpanish ye champagne uchishandisa Methode Champenoise kubva kune inowanikwa Spanish varietals Macabeo, Xarello, uye Parellada - kubereka Cava.
Makore gumi gare gare, Manuel Raventos akatanga kushambadzira muEurope yose yeCava yake. Muna 1888, Cordorniu Cavas akahwina yekutanga menduru dzegoridhe nemibairo, achigadzira mukurumbira weSpanish Cava kunze kweSpain.
Spain ndiyo yechitatu pakukura mutengesi wewaini inopenya, kuseri kweFrance zvishoma, ine zvinotengeswa kunze kwenyika zvakanyanya kuUnited States, Germany, neBelgium. Sewaini inopenya yeSpain, Cava inogadzirwa nenzira yechinyakare yeFrench Champagne. Iyo inogadzirwa zvakanyanya munharaunda yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenyika (Penedes nharaunda yeCatalonia), nemusha weSant Sdaurni d'Anoia musha kune dzakawanda dzedzimba dzekugadzira dzeCatalan. Nekudaro, vagadziri vakapararira mune dzimwe nzvimbo dzenyika, kunyanya uko Cava kugadzirwa kuri chikamu cheDenominacion de Origen (DO). Inogona kuva chena (blanco) kana rose (rosado). Mhando dzemazambiringa dzinonyanyozivikanwa ndedzeMacabeo, Parellada neXarel-lo; zvisinei, mazambiringa chete anogadzirwa nenzira yechinyakare anogona kunzi CAVA. Kana mazambiringa akagadzirwa neimwe nzira anofanirwa kunzi "waini inopenya" (vinos espumosos).
Kugadzira rose cava, kusanganisa ndeye NO NO.
Waini inofanira kugadzirwa nenzira yeSaignee, uchishandisa Garnacha, Pinot Noir, Trepat kana Monastrell. Kunze kweMacabeu, Parellada neXarel-lo, cava inogonawo kusanganisira Chardonnay, Pinot Noir uye Subirat mazambiringa.
Cava inogadzirwa mumhando dzakasiyana dzekutapira, kubva pakaoma (brut nature) kuburikidza nebrut, brut reserve, seco, semiseco, kusvika dulce (inotapira). Mazhinji cavas haasi evintage nekuti iwo musanganiswa wemavintages akasiyana.
Cava Marketing Matambudziko
Nei izwi rekuti Champagne richiyerera sechisikigo kubva pamiromo yedu, uye Cava inogona kunge isiri muduramazwi redu rewaini? Waini inopenya kubva kuSpain yakaiswa mumusika wewaini wakazara unopenya, uye inotambura nebhajeti rekushambadzira risina kukwana. MaItaly akashandisa mabhiriyoni emadhora uye maEuro kuita kuti Prosecco ive chikamu chejagoni yedu yemazuva ese, uye France yanga ichisimudzira Champagne kubvira 1693 (apo Dom Pérignon "yakagadzira" Champagne,
Vatengi vewaini vane ruzivo vanokoshesa hunhu huri muCava: kukohwa nemaoko, kudzvanya zvinyoro-nyoro kwemasumbu mudiki madiki epamusoro nzvimbo yekutsikirira; yakawedzerwa lees kuchembera mubhodhoro; ruoko disgorgement for premium cuvees; uye nekuvimbika kutevera tsika dzechinyakare. Nepo boka rewaini richiziva, uye richikoshesa zvakadzama, vamwe vanongoita "sewaini," vanoona waini inopenya iyo iri.
Mu-chitoro masherufu masherufu anoisawo Cava parumananzombe, kazhinji achisaidzira Cava mukati neyakachipa yejagi waini kana mweya yakachipa. Macuve emhando yepamusoro (reserva, Gran Reserva, uye Cava del Paraje) haatore nzvimbo muuropi hwevatengi vewaini, kana, kana vakadaro, inogona kunge iri muchikamu cheuropi chinonzi "bhajeti," ichimanikidza Cava kukwikwidza. newaini yeChirungu inopenya uye kunyange mamwe maChampagne asingadhure.
Cava iri kukura mukuzivikanwa, uye mitemo mitsva yakapinda kuchengetedza uye kuwedzera mhando kugadzira iyo Regulatory Council yeCAVA Yakachengetedzwa Dhizaini Yekutanga. Kutanga muna 2018, Javier Mapeji akatungamira sangano iri zvakare Mutungamiriri weBarcelona Wine Week (yepasi rose Spanish wine fair).
Mitemo ichaita sei? Mitemo ichawedzera hunhu hweCava uye inosanganisira vese varimi vewaini nevagadziri veDesignation of Origin (DO), ichiwedzera yakanyanya mavambo, uye mhando.
Kana iyo Cava yakura kupfuura mwedzi gumi nemasere ichadaidzwa kuti Cava de Guarda Superior, uye yakagadzirwa kubva kumazambiringa kubva kuminda yemizambiringa yakanyoreswa muRegulatory Board's Registration yeGuara Superior, uye inofanirwa kuita zvinotevera zvinodiwa:
a. Mazambiringa anofanira kunge aine makore gumi
b. Mazambiringa anofanira kunge ari organic (5 makore ekuchinja)
c. Kuwanda kwegoho re4.9 matani/eka, kugadzirwa kwakaparadzana (kusiyanisa kucherechedzwa kubva mumunda wemizambiringa kusvika kubhodhoro)
d. Uchapupu hwevintage uye organic - pane iyo label
1. Kugadzirwa kweCavas de Guarda Superior (inosanganisira Cavas Reserve ine hushoma hwemwedzi ye18 yekuchembera; Gran Reserva ine hushoma hwemwedzi ye30 yekuchembera), uye Cavas d Paraje Calificado - kubva kunzvimbo yakakosha ine hushoma hwemwedzi ye36 kuchembera - inofanira kunge iri 100 muzana organic panosvika 2025.
2. Nzvimbo itsva yeDO Cava: Comtats de Barcela, Ebro Valley, neLevante.
3. Kuzvidira kusikwa kwe "Integral Producer" label ye wineries inotsikirira uye vinify 100 muzana yezvigadzirwa zvavo.
4. Kutsva kwenzvimbo uye kupatsanurwa neCava DO kuchaonekwa pane zvinyorwa zvemabhodhoro ekutanga muna Ndira 2022.
Corpinnat. Wineries Kurwira Rusununguko
Vamwe vekuSpain vanogadzira waini vakasiya DO yavo, vachigadzira zita renhengo imwe chete: Conca del Rui Anoia nekuti havagutsikane neiyo Dos nhoroondo yekusakendenga kwemhando iyo inozvidza mhando. Corpinnat izita idzva pakati pemhando yepamusoro, inopenya yewaini yeSpanish, uye vatangi vakapa chirongwa kuSpain Ministry of Agriculture yekupihwa chitupa. Kana / kana ikabvumidzwa, ichave iri kugadziridzwa kunoshamisa kweCava brand.
Muna 2019 mawineri mapfumbamwe akasiya Cava DO kuti agadzire Corpinnat yewaini yakanaka inopenya. Vagadziri vewaini vaida kusanganisa Corpinnat neDO asi bhodhi rekutonga rakaramba - saka vakabva vaenda. Vagadziri vewaini vanofarira kugadzira waini ine tarisiro pane terroir. Kusiyana neFrance, Spain haina terroir yakatarisa classification system, uye vagadziri vadiki vemhando yewaini muSpain yese vanga vachikumbira shanduko kwemakore. Vagadziri vakawanda vanotenga mazambiringa kubva kune chero ani uye chero munzvimbo yavo yakakura kwazvo yakatsanangurwa nzvimbo vanogadzira zvakawanda zvakachipa, zvinotemesa musoro, zvigadzirwa zvemaindasitiri, vachizvinyora neDO rimwechete, zvichiita kuti zvisaite kuti zvidiki, terroir-drive estates zvisiyanise. .
Cava haipfuuri mukuyedzwa kwakafanana kwakasimba seChampagne.
Izvi zvinoguma nechokwadi chekuti vagadziri vakuru vecava vanokwanisa kuburitsa waini yemhando yakaderera ine mhando imwechete inozora vagadziri vadiki vemhando yakanaka yewaini ine imwechete mediocre brashi. Kusavapo kwekutonga pamusoro pemhando kwakonzera chokwadi chekuti iyo yaimbozivikanwa pasi rose zita reCava rakarasikirwa nemukurumbira apo musika wepasi rose wewaini inopenya. Cava yakarasikirwa nemugove wemusika kune prosecco, iyo nzira yechamat inoita kuti zvisadhure kugadzira.
Pane imwe nguva ichangoburwa yewaini yeNew York City, yakatsigirwa neEuropean Union (Quality Wines kubva kuMoyo weEurope) ndakava nemukana wekuona maCavas mashoma. Pakati pewaini inopenya iripo, zvinotevera ndizvo zvandaifarira:
1. Anna de Codorniu. Blanc de Blancs. ITA Cava-Penedes. 70 muzana Chardonnay, 15 muzana Parellada, 7.5 muzana Macabeo, 7.5 muzana Xarel.lo
Anna aiva ani uye sei akaisa zita rake paCava? Anna de Codorniu anozivikanwa semukadzi akachinja nhoroondo yewaini kuburikidza nehunyanzvi hwake, uye kunaka kwaakapayona kuwedzera kweChardonnay varietal muCava musanganiswa.
Kuziso, Anna anopa ruvara rweblonde rwakajeka uye rwakasimba rune girinhi hukuru huchiita kuti zvinakidze kuona nekuti mabhuru akanaka, anoshingirira, ane simba uye anoenderera. Mhino inofara nekuwanikwa kwematombo akanyorova, maranjisi emaranjisi, uye muchero wekupisa wakabatana nekunhuhwirira kwekuchembera (funga toast uye brioche). Iyo mukanwa inonakidzwa nekrimu, yakareruka acidity, uye kufara-kwenguva refu kunotungamira kumagumo anotapira. Yakakwana seaperitif, kana nemiriwo yakabikwa, hove, hove dzegungwa uye nyama yakagochwa; inomira yakasimba yoga kana kubatanidzwa nemadhizeti.
2. L'avi Paul Gran Reserva Brut Nature. Maset. 30 muzana Xarel-lo, 25 muzana Parellada, 20 muzana Chardonnay.
Paul Masan (1777) anoyeukwa muL'avi Pau Cava, seyekutanga mudzinza remhuri. Mazambiringa ekare (20-40 makore) anodyarwa pakaderera density panzvimbo yakakwirira 200-400 m pamusoro pegungwa. Waini inochembera mumacellars 5 m pazasi pevhu nekuchembera kwemwedzi makumi matatu nematanhatu.
Ziso rinowana mimvuri yegoridhe, uye mabhuru akanyatsobatanidzwa nepo mhino ichipihwa muchero wakaibva kwazvo, macitrus, brioche, nemaarumondi. Kamukanwa kanoona kuoma, uye kwakapfava rwendo rwunotungamira kumagumo akareba, anoshingirira nekutapira kunoratidza huchi nema crabapples. Shingairira nemaprawn uye mhiripiri inopisa kana kudira pamusoro pema oyster.
Read Chikamu 1 Pano: Spain Inosimudza Mutambo Wayo Wewaini: Zvakawanda Kupfuura Sangria
Read Chikamu 2 Pano: Waini dzeSpain: Ravira Musiyano Zvino
© Dr. Elinor Garely. Ichi chinyorwa chekodzero, kusanganisira mapikicha, hachigone kudhindwa pasina mvumo yakanyorwa kubva kumunyori.
kurima Barcelona Europe European Union Furanzi Jerimani Itari Marketing New York City Speini nyika dzakabatana waini
Ndira 24, 2022 pa08: 54
Yakanakisa uye yakazara chinyorwa nezve nyika yewaini inopenya muSpain. Ndatenda Dr. Elinor Barely. Hongu, ndinobvuma, huropi hwedu hwakaomeswa nezwi Champagne kune zvese zvinopenya. Ini ndaifanira kudzidzisa pfungwa dzangu kusiyanisa uye kutanga cavasocials.org senzira yekutanga nekudzidza nezve waini inopenya muSpain CAVA neCORPINNAT. Heano kune inopenya 2022! uye zvimwe zvinyorwa pamusoro pekusiyana kweSparkling Wines pasi rese.